भजनसंग्रह 44 ERV-NE - प्रमुख - Bible Gateway
भजनसंग्रह 43भजनसंग्रह 45
भजनसंग्रह 44 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
प्रमुख संगीतकारलाई: कोरह परिवारको मस्किल भन्ने भजन।
44 हे परमेश्वर, हामीले तपाईंको विषयमा सुनेका छौं।
हाम्रा पिता-पुर्खाहरूको जीवनकालमा तपाईंले के-के गर्नुभयो उहाँहरूले बताउनु भयो।
तपाईंले धेरै बर्ष अघि गरेका कार्यहरू, तिनीहरूले हामीहरूलाई बताए।
2 परमेश्वर, तपाईंले आफ्नो महान् शक्ति सहित
अरूका जग्गाहरू लिनुभयो अनि हामीलाई दिनु भयो।
तपाईंले ती विदेशी मानिसहरूलाई टुहुरो पार्नु भयो।
तपाईंले तिनीहरूलाई यो ठाउँ छोड्न वाध्य गर्नुभयो।
3 हाम्रा पिताहरूका तरवारहरू थिएनन् जसले जमीन खोस्यो।
उनीहरूका पाखुराहरू बलिया थिएनन्, जसले तिनीहरूलाई विजयी गराए।
यो हाम्रो पिता-पुर्खाहरूसँग तपाईं भएको कारणले गर्दा भएको हो।
परमेश्वर, तपाईंको महान् शक्तिले हाम्रा पिता-पुर्खाहरूलाई बचाउनु भयो।
किनभने तपाईंले उहाँहरूलाई प्रेम गर्नुभयो!
4 हे मेरो परमेश्वर, तपाईं मेरो राजा हुनुहुन्छ।
आदेश दिनुहोस् अनि याकूबका मानिसहरूलाई विजयतर्फ अगुवाइ गर्नुहोस्।
5 मेरो परमेश्वर, तपाईंको सहायताले गर्दा हामी आफ्ना शत्रुहरूलाई पछि धकेल्ने छौं।
तपाईंको नाउँमा हामी तिनीहरूलाई कुल्चदै हिंड्ने छौं।
6 म मेरो धनु र तरवारमाथि भरोसा राख्दिनँ।
मेरो तरवारले मलाई बचाउन सक्दैन।
7 हे परमेश्वर, तपाईंले हामीलाई मिश्रबाट बचाउनु भयो।
तपाईंले हाम्रा शत्रुहरूलाई लज्जित बनाएर राख्नु भयो।
8 हामीले दिनभरि नै परमेश्वरको स्तुति-गान गाएका छौं।
अनि तपाईंको नाउँको प्रशंसा सदा-सर्वदा गर्नेछौं!
9 तर, हे परमेश्वर, तपाईंले हामीलाई छोड्नु भयो, तपाईंले हामीलाई लज्जित पार्नु भयो।
तपाईं युद्धभूमिमा हामीसँग आउनु भएन।
10 तपाईंले हाम्रा शत्रुहरूलाई पछि धकेल्न लगाउनु भयो।
हाम्रा शत्रुहरूले हाम्रो सम्पत्ति लगेर गए।
11 तपाईंले हामीलाई खाद्य रूपमा खाओस् भनेर भेंडा जस्तो टाढा अलग्ग राखि दिनु भयो।
तपाईंले विदेशीहरूका माझ हामीलाई छरपस्ट पारेर छाडी दिनुभयो।
12 हे परमेश्वर, तपाईंले आफ्ना मानिसहरू सित्तैमा बेचिदिनु भयो,
तपाईंले तिनीहरूको दर दाम पनि गर्नु भएन।
13 तपाईंले छिमेकीहरू समक्ष हामीलाई हाँसोको पात्र बनाउनु भयो।
तिनीहरूले हामीमाथि हाँसे र खिल्ली उडाए।
14 हामी हँसाउने कथाहरू मध्ये एक हौं जो मानिसहरू भन्छन्।
आफ्नो देश नभएका मानिसहरू सम्म हामीमाथि हाँस्छन् र आफ्ना टाउकाहरू हल्लाउँछन्।
15 म लाजले छोपिएको छु।
सारा दिन आफ्नो लज्जित रूप हेर्छु।
16 मेरा शत्रुहरू जसले मसित साटो फेर्न चाहन्थे,
तिनीहरूको खिसी र अपमानबाट उप्जेको लाजले गर्दा म आफैं लुक्छु।
17 परमेश्वर, तपाईंलाई हामीले बिर्सेका छैनौं।
अझै यी सबै कुराहरू तपाईंले हाम्रा लागि गर्नु हुन्छ।
हामीले तपाईंको करार पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा छल-कपट गरेका छैनौ!
18 परमेश्वर, हामी तपाईंबाट टाढिएका छैनौं।
हामी तपाईंलाई पछ्याउनका लागि रोकिएका छैनौं।
19 तर, परमेश्वर, तपाईंले हामीलाई यस ठाउँमा मिच्नु भयो जहाँ स्यालहरू बस्दछन्।
तपाईंले हामीलाई त्यस ठाउँमा छाडिदिनु भयो जुन मृत्यु भन्दा पनि भयानक अंध्यारो छ।
20 के हामीले हाम्रो परमेश्वरको नाउँ बिर्सियौं?
के हामीले विदेशी देवताहरूलाई प्रार्थना गर्यौ? होइन!
21 निश्चय नै परमेश्वर यी सबै कुराहरू जान्नुहुन्छ।
उहाँले हाम्रो गहन गुप्त कुराहरू पनि जान्नुहुन्छ।
22 हे परमेश्वर, दिनभरि हामी तपाईंका लागि मरिमेट्‌यौं!
हामी मार्न लगिएका भेंडा़ जस्तै छौं।
23 उठ्नु होस्, मेरो स्वामी!
किन तपाईं सुतिरहनु भएको छ?
उठ्नु होस्! हामीलाई सदाको निम्ति नछोडनु होस्!
24 परमेश्वर, तपाईं किन हामीदेखि लुकिरहनु हुन्छ?
तपाईंले हाम्रो पीर र सङ्कटहरूलाई बिर्सिनु भयो?
25 हामीलाई फोहोर भित्र हुत्याइएको छ।
हाम्रो शरिर धूलोमा पल्टिरहेको छ।
26 हे परमेश्वर, उठ्नु होस् र हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्।
तपाईंको स्नेहपूर्ण करूणाले हामीलाई बचाउनुहोस्।